Global Voices teny Malagasy » Espaina: An’arivony Manao Diabe Manohitra Ny Herisetra Atao Noho Ny Fasahamihafàn’ny Lahy sy Vavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2015 11:49 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Arrontes Nandika (en) i Marianna Breytman, Sylvia Aimée
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Peta-drindrina iray niely patrana mikasika ny diabe 7N.
Tamin'ny faran'ny herinandro teo, nameno ny arabe afovoan-tanànan'i Madrid indray ireo olona, tamin'ity indray mitoraka ity, nasehony ny fanoherana ny herisetra ata noho ny maha-lahy na vavy. Ao anatin'ny hetsika mitondra ny anarana hoe “7N” (sarinteny iray entina hilazana ny fihetsiketsehana ny 7 Novambra), amin'ny ankapobeny olona eo amin'ny 20.000-30.000 eo ho eo, avy amin'ny Espaina manontolo no niara-nirohotra nameno an'i Madrid afovoany mba hiampanga ny herisetra atao noho ny maha-lahy na vavy sady hangataka amin'ny fanjakana mba hanao laharam-pahamehana ilay olana. Na eo aza ireo lalàna Espaniôla misy, manohitra ny herisetra hita ao antokantrano ireo karazana fikambanana, sahala amin'ny Doctors of the World , manakilasy ireo fepetra fampiharan'ny fanjakana ankehitriny ho tsy ampy .
Nivadika ho fihetsiketseham-behivavy ts mbola nisy toa azy ilay voalaza ho “diabe ho an'ny firenena”, nokarakarain'ireo vondrona manodidina ny 400 ahitana olona rehetra avy amin'ny lafivalon'ny firenena sy ireo mpisolo tena ny ankamaroan'ireo antoko politika ao Espaina.
Ny tena hafatra nentin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia miantoraka amin'ireo antoko politikan'ny firenena, mangataka asa maika manohitra ireo famonoana vokatry ny herisetran-dehilahy (“violencia machista”). Nahitàna fanararaotana ireo olona miaraka amin'ny tena, ankizy ary ireo olona nanova taovam-pananahana io andiana herisetra io, ary noheverina ho namoizana ain'olona maherin'ny 1300 tao Espaina, nandritra ny 20 taona farany teo, araka ny voalazan'ireo mpanohitra. Ny taona 2015 monja , nahitàna vono olona maherin'ny 80 tamin'io tranga io – 41 tamin'io no nanjo ireo vehivavy noho ny nataon'ny vadiny na ny sakaizany, araka ny feminicidio.net , tranonkala iray izay manome fahafahana mijery sy manangona tahirin-kevitra mikasika ny herisetran-dehilahy ao Espaina. Tao anaty hafatra ho an'ireo mpamaky, nanantitrantitra ny hitahirizana ny fahatsiarovana ireo izay maty novonoina ny Feminicidio.
Hatramin'ny nanombohanay nandrakitra antsoratra mikasika ireo vehivavy maty ny taona 2010, tranga miisa 648 no voasoratray. Tao anatin'ireo angonay, ny Geofeminicidio (ilay milin'ny fitadidiana), ny famonoana vehivavy no tantara tsy hita avy ao amin'ny fiainana tsy tontosan'ireo vehivavy. Ao ambadik'ireo angona, misy ny filàna mitahiry ny fahatsiarovana an'ireo vehivavy maty noho ny herisetra natao. amin'ny maha-lahy na vavy. Faniriana iray ny tsy hanadino, fahanginana iray nampivondrona. Mandray anjara amin'ny diaben'ny 7N izahay, resy lahatra fa tsy afaka tsy azonay avela ny nofinofy mikasika ny famongorana ny famonoana vehivavy sy ny herisetra an-tokantrano.
Sahala amin'ireo tenifototra #TerrorismoMachista (Fampihorohoroana Manavakavaka), #CuestiónEstado (Olam-Panjakana), #PactoEstado (Dinam-Panjakana), #NosFaltanTodas (Ilainay izy rehetra), #NiUnaMenos (Tsy alatsaka na iray aza), #7Noviembre (7 Novambra), ary #MarchaContraViolenciasMachistas (Diabe Manohitra ny Herisetran-dehilahy), nikisaka avy eny an'arabe nankany anaty tambajotra sosialy ireo fihetsiketsehana. Ny antoko eo amin'ny fitondrana indrindra indrindra no tsy hita nandritra ny andron'ny fihetsiketsehana tao Madrid, ny Antokom-Bahoaka (Partido Popular), izay tany am-boalohany dia nanohitra ny diabe.
Nanamarika ny Ahora Madrid, fivondronan'olom-pirenena izay miandraikitra ny filankevitry ny tanànan'i Madrid amin'izao fotoana izao, tamin'ity bitsika manaraka ity:
Menos el @ppmadrid , el resto de grupos recibe a las organizadoras del #7N . #YoVoy7N  pic.twitter.com/9jHb9mEBvZ 
Ankoatra ny Antokom-bahoaka, mandray tsara ireo mpikarakara ny 7N avokoa ireo vondrona ambiny.
Ito ambany ito ny lahatsary iray mikasika ny diabe tao anaty gazety Diagonal:
Midadasika ny fanohanana an'ireo mpanao fihetsiketsehana hatreto, sady mandrakotra be ny hetsi-panoherana araka izay azony atao ny media. Tsy ny rehetra anefa no afa-po amin'io fandrakofana io, na izany aza, sady ny olona sasany mandefa ny fahasorenany amin'ny Twitter. Ohatra, mitsikera amin'ny fampiasana ny teny “voalaza fa” any anaty tatitra mikasika ny herisetra natao an'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano i @fanetin :
Mensaje a lxs periodistas del ‘murió presuntamente’. Tomad nota o seréis cómplices p/ v @fanetin  #7NFeminista  pic.twitter.com/haVcwdQo25  — peoplewitness (@PeopleWitness) noviembre 7, 2015 
Hafatra ho an'ireo mpanao gazety “voalaza fa maty”: Raiso an-tsoratra na meteza ho mpiray tsikombakomba.
Mety tena ho zava-dehibe raha toa androany ny media mba mampitsahatra ny fifantohana amin'ny vaovao mikasika ireo vehivavy miampanga [ny herisetra], ka hifantoka amin'ireo lehilahy tsy mampihatra azy io.
Muchos eufemismos al escribir sobre los ASESINATOS machistas a mujeres, la misma tibieza para (no) llevar en portada el #7N  — Belén M. Iglesias (@belen_iglesias) noviembre 8, 2015 
Maro no nampiasa sarinteny raha nanoratra momba ireo FAMONOANA vokatry ny herisetra an-tokantrano manjo ireo vehivavy, (tsy) firaharahiana tahaka izany amin'ny (tsy) hanaovana ny #7N eo amin'ny pejy fandraisana.
Na dia amin'ny fotoana sahala amin'izao aza, raha vao misehoseho amin'ny filazàna fanohanana momba ny hetsi-panoherana ny herisetran-dehilahy ireo mpiaro ny vehivavy, zara raha toepo mankalàza no hita. 72 ora monja taorian'ilay famoriam-bahoaka 7N, tranga efatra mampiahiahy sahady momba ny herisetra an-tokantrano no niely nanerana an'i Espaina. Mampalahelo, mbola misy hatrany hatrany ny fandrahonana ateraky ny herisetra tahaka izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/23/76675/
 Doctors of the World: https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_du_Monde
 ho tsy ampy: http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Esperamos-cambios-violencia-periodo-preelectoral_0_450755936.html
 Ny taona 2015 monja: http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015
 noviembre 6, 2015: https://twitter.com/AhoraMadrid/status/662639879730384896
 noviembre 7, 2015: https://twitter.com/PeopleWitness/status/662971032693825536
 noviembre 7, 2015: https://twitter.com/Hibai_/status/662951997386203136
 noviembre 8, 2015: https://twitter.com/belen_iglesias/status/663449046972030976